Noloshu maahan sugida in duufaantu dhaafto. Waxay ku saabsan tahay barashada sida loo cayaaro roobka. - Vivian Greene - xigasho Pedia
Noloshu maahan sugida in duufaantu dhaafto. Waxay ku saabsan tahay barashada sida loo cayaaro roobka. - Vivian Greene
Noloshu maahan in la sugo duufaanta inay soo dhaafto, laakiin waa wax badan oo ku saabsan barashada sida loo cayaaro roobka, waa tusaale kaliya oo lagu muujiyo noloshu si hagaagsan uma socoto waqtiga oo dhan.
Waxaad la kulmi doontaa caqabado badan khadka hoose, oo runtii ma jiro dariiq aad uga baxsan karto fursad kasta. Ma sii wadi kartid sugida duufaanka inuu dhaafo; halkii aad ka bilaabi lahayd barashada sida loo qoob-bixiyo roobka.
Nolosha, runti waxaad la kulmi doontaa carqalado badan, laakiin waa inaadan waligaa ka baqin caqabadahaas oo aad go aansato inaad halkaas ku istaagto.
Waa inaan sinaba loo sugin waqtiga adag ee lagu dhaafo, kaligiis. Taabadalkeed, waa inaad noqotaa nooca qofka xajinaya karti kasta oo qoob-ka-ciyaaraya xitaa marka roob da’o.
Xusuusnow in carqalad kasta loo qorsheeyay in lagu siiyo duruus ugu weyneed noloshaada.
Waa inaadan sugin in dhibaatooyinka ay ka gudbayaan, laakiin waa inaad soo qaadataa xoogaa ama xirfado kale si aad ula dagaallanto dhibaatooyinka waqtigaas adag, oo aad naftaada u tababarto sidii looga gudbi lahaa.
Ogoow inaysan waqti adag sii jiri doonin. Waa wax ku saleysan aragtidaada oo dhan! Sidaa daraadeed, waa inaad had iyo jeer lahaataa aragti aad kula dagaallanto waqtiyada ad adag oo aad noloshaada wax wanaagsan ku qabato, taas oo ah inaad ka adkaato dhammaantood, oo aad waqti fiican heshid dhamaadka maalinta.
Caqabada kasta waxay ku siin doontaa casharro nolosha ah, iyo marka aad hirgalinayso kuwa aad adigu baratay sii wad koritaanka sannadaha inuu yimaado.
Maahmaah ku saabsan barashada
Xigashooyinka ku saabsan Fadhiga iyo Sugitaanka
Xigasho On Dance
Xigasho roobaadka roobka
Quotes Qoob-ka-ciyaarka Gaaban
Sugitaanka Quusin Maalmo Fiican